CORONAVIRUS : Hanampy ireo marefo ara-pivelomana ny fitondram-panjakana
Raha ny antontan’isa farany, olona 19 izao no voamarina fa voan’ny valanaretina coronavirus raha toa ka 60 no vita fitiliana. 25 mars 2020
Tsy ny olona mitoka-monina ihany no notiliana fa ireo olona nifanerasera taminy koa. 18 amin’izy ireo no tsy ahitana soritr’aretina raha toa ka manavy ny iray ary efa mihatsara ny fahasalamany.
Tafiditra ao anatin’ny fihibohana izao ny tanànan’Antananarivo sy Toamasina. Olona maro araka izany no mihasahirana ara-pivelomana satria ny ankamaroan’ny Malagasy dia ny hanina anio tadiavina androany. Manoloana izany, tsy manentsin-tadiny ny fitondram-panjakana manoloana ny fitarainan’ny olona. Nanambara ny Filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina nandritra ny fotoana nivahinianany tao amin’ny fandaharana manokan’ny TVM omaly alina fa hanome fanampiana ireny olona ireny manomboka ny alakamisy izao.
Hisitraka izany ny mpamily fiara karetsaka, mpamily taksibe, mpanampy ny mpamily, mpanasa lamba, mpivarotra amoron-dalana, mpivarotra gazety, zokiolona, mpatory an-dalana ary ny mpivaro-tena. Hozaraina amin’izany ny vary, menaka, voamaina, savony, koba aina,... Ireo olona ireo no tena voatohintohina ny fivelomany amin’izao satria voarara ny fivezivezena be loatra indrindra fa ny amin’ny alina. Efa misy koa ny vola 10 miliara ariary hozaraina amin’izay tratran’ny fahavoazana ka efa fantatra fa 100.000 ariary avy no homena ny mpamily fiara karetsaka.
Ankoatra izay, fantatra fa ho tonga rahampitso ny fitaovana ahafahana manao fitiliana haingana ka ao anatin’ny 20 minitra monja dia fantatra ny valiny na mitondra ny aretina ilay olona na tsia. Raha ny fandoavana ny faktioran’ny Jirama indray, tsy hisy ny fandoavana izany amin’ity volana ity fa mbola hojerena manokana ny fomba andoavana azy amin’ny volana manaraka, tsy hisy koa anefa ny fanapahana ny jiro na eo ary izany tsy fandoavana vidin-jiro izany.
Nanamafy ny fiantsoana fitoniana moa ny Filoham-pirenena tamin’izany ary nangataka fiaraha-mivavaka mba hahafahana mifehy ny aretina haingana.